ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း 'ဂါဂျာ'(Gaja) အိန္ဒိယဘက်ကို ဝင်ရောက်မည်ဟု ခန့်မှန်းထား၊ မြန်မာနိုင်ငံဘက်? - Yangon Media Group
ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်း ‘ဂါဂျာ'(Gaja) အိန္ဒိယဘက်ကို ဝင်ရောက်မည်ဟု ခန့်မှန်းထား၊ မြန်မာနိုင်ငံဘက်?
ကိုကိုး ကျွန်းမြို့၏ အနောက်-အနောက် တောင်ဘက်မိုင် ၂၆ဝ ခန့် အကွာ ပင်လယ်ပြင်ကိုဗဟိုပြု၍ ဖြစ်ပေါ်နေသော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ”ဂါဂျာ” (Gaja)သည် ပိုမို အားကောင်းလာပြီး အိန္ဒိယဘက် ကိုဝင်ရောက်မည်ဟု ခန့်မှန်းထား ကြောင်း မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက် ညနေထုတ်ပြန်ချက်များ အရ သိရသည်။
မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ နိုဝင်ဘာလ ၁၁ ရက် ညနေ ၄ နာရီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ ဘင်္ဂ လားပင်လယ်အော်အရှေ့အလယ် ပိုင်းနှင့်ယင်းနှင့် ဆက်စပ်လျက်ရှိ သော ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော် အနောက်အလယ်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ တောင်ပိုင်းတို့တွင် ဖြစ်ပေါ်နေ သော ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်း ”ဂါ ဂျာ” (Gaja) သည် အနောက်-အနောက်မြောက်ဘက်သို့ ရွေ့ လျားခဲ့ပြီး၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ ပို့ဘလဲ ယားမြို့၏ အနောက်မြောက် ဘက်မိုင် ၂၅ဝ ခန့်၊ ချင်းနိုင် မြို့၏အရှေ့ဘက် မိုင် ၅ဝဝ ခန့်၊ မြန်မာနိုင်ငံ၊ ကိုကိုးကျွန်းမြို့၏အနောက်-အနောက်တောင်ဘက် မိုင် ၂၆ဝ ခန့်အကွာ ပင်လယ် ပြင်ကိုဗဟိုပြုနေကြောင်း သိရ သည်။
မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန ညွှန်ကြား ရေးမှူးဦးလှထွန်းက ”ဆိုင်ကလုန်း ကအားကောင်းတဲ့ ဆိုင်ကလုန်း မုန်တိုင်းအဖြစ်ရောက်ရှိပြီး နို ဝင်ဘာ ၁၂ ရက်နေ့လောက်မှာ အိန္ဒိယဘက်ကိုသွားဖို့ ရာခိုင် နှုန်းများပါတယ်။ ဒီဘက်ကိုတော့ တက်လာဖို့မရှိပါဘူး။ အိန္ဒိယ ဘက်ရောက်သွားရင်တော့ အား ပြန်ပျော့သွားဖို့ရှိပါတယ်။ လမ်း ကြောင်းကတော့ အိန္ဒိယဘက်ကို ပဲ ဦးတည်နေပါတယ်။ မုန်တိုင်း အရှိန်ကြောင့်တော့ မိုးရနေဦးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ နောက်နှစ်ရက် လောက်အထိတော့ မြစ်ဝကျွန်း ပေါ် ဒေသတွေဖြစ်တဲ့ရန်ကုန်၊ ဧရာဝတီ၊ ပဲခူးအပါအဝင် မြန်မာ နိုင်ငံအလယ်ပိုင်းတွေအထိတော့ မိုးရနိုင်ပါတယ်။ အိန္ဒိယဘက် ရောက်သွားရင်တော့ မိုးပြန်လျော့ သွားမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြော သည်။
မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ နိုဝင်ဘာ ၁၁ ရက်ထုတ်ပြန်သော နောက် နှစ်ရက်အတွက်ခန့်မှန်းချက်တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ဧရာဝတီ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ရခိုင်ပြည်နယ် တို့တွင် နေရာစိပ်စိပ်မိုးထစ်ချုန်း ရွာနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ထုတ်ပြန် ချက်အရ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်း တစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင် လယ်ပြင်တို့တွင် တစ်ခါတစ်ရံမိုးသက်လေပြင်းများကျရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးနိုင်ကြောင်း၊ မိုးသက် လေပြင်းကျရောက်စဉ် ရေပြင် မြေပြင်လေသည် တစ်နာရီလျှင် ၃၅ မိုင်မှ မိုင် ၄ဝ အထိ တိုက် ခတ်နိုင်ကြောင်း၊ လှိုင်းအမြင့်မှာ မြန်မာ့ကမ်းရိုးတန်းတစ်လျှောက်နှင့် ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့တွင် ရှစ်ပေမှ ဆယ်ပေခန့်ရှိနိုင်ကြောင်း သိရသည်။
မိုးလေဝသနှင့် ဇလဗေဒ ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ ခန့်မှန်းချက်အရ နိုဝင်ဘာ ၁၂ ရက် နံ နက်ပိုင်းတွင် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းနှင့် ကချင်ပြည် နယ်တို့တွင် နေရာကွက်ကျား၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်း၊မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ရှမ်းပြည်နယ် (မြောက်ပိုင်း)၊ ချင်းပြည်နယ်၊ ရခိုင် ပြည်နယ်၊ ကယားပြည်နယ်၊ ကရင် ပြည်နယ်နှင့် မွန်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာကျဲကျဲနှင့် ကျန်တိုင်းဒေသ ကြီးနှင့်ပြည်နယ်တို့တွင် နေရာ စိပ်စိပ် မိုးထစ်ချုန်းရွာမည်ဖြစ် ကြောင်း၊ ရွာရန်ရာနှုန်း ၈ဝ ဖြစ် ကြောင်း သိရသည်။